Fantaro Ireo Olona Nahavita Niaro Ala Trranainy Efa 12 000 taona Tsy Ho Lasa Toeram-Pitrandrahana Arintany · Global Voices teny Malagasy
Fantaro Ireo Olona Nahavita Niaro Ala Trranainy Efa 12 000 taona Tsy Ho Lasa Toeram-Pitrandrahana Arintany
Efa 12 000 taona, tany amin'ny vanim-potoanan'ny ranomandry ny ala Hambach.
Voadika ny 29 Avrily 2019 12:50 GMT
Vakio amin'ny teny Français, русский, Italiano, Español, Ελληνικά, Esperanto , English
(Fanamarihana: lahatsoratra anglisy nivoaka tamin'ny Novambra 2018)
Loharano : Hambi info avy ao amin'ny Flickr…
Nosoratan'i Renee Karunungan tao amin'ny 350.org ny dika voalohany nipoiran'ity lahatsoratra ity ary nifototra tamin'ny lahatsary fanadihadiana notontosain'i Sarah Hüther, Lou Huber-Eustachi ary Ruben Neugebauer.
Any amin'ny fanjakana alemàna ao North Rhine-Westphalia no misy ny Alan'i Hambach izay efa 12 000 taona ary efa tany amin'ny vanim-potoanan'ny ranomandry. anefa amin'izao fotoana izao , 10% monja amin'ny 5 000 hektara tany am-piandohana no hany sisa tavela.
Tsy misy atahorana io ampahany amin'ny ala ao Hambach io – hatreto. Niomana hanadio ny sisa ambiny amin'ilay ala mba hanitarana ny iray amin'ireo toeram-mpitrandrahana harena ankibon'ny tany mitafo lanitra ny RWE, ilay alemàna ngezalahin'ny angovo, izay nividy ilay ala ny taona 1978, na nosy aza ny fanoherana mivaivay. Tany am-piandohan'ny volana Oktobra, nandidy ny RWE ny fitsarana mba hampitsahatra ny tetikasany satria toa mbola miantona ilay raharaham-pitsaràna iray hafa ho fiarovana ilay ala. Na dia fandresena goavana ho an'ireo rehetra niasa hiaro ny ala aza izany, dia mbola lavitr'ezaka ny tolona, ary hatramin'ny taona 2012, mafana fo maro no niambina ny Hambach,vonona ny hiaro azy hatramin'ny farany sy hampitsahatra ny fitrandrahana arintany ao Alemana.
Ireo mpiaro ny ala.
“Nanapa-kevitra ny hiaina aty anaty ala aho ary hametraka ny vatako ho eny anelanelan'ireo milina fanapahana hazo,” hoy Strobo, iray amin'ireo mafana fo mipetraka ao anatin'ny Alan'i Hambach.
Mafana fo maro no nanangana trano hazo honenana ao sy nanagana sakana hanakanana ilay orinasa mpitrandraka harena ankibon'ny tany sy ireo fiaran'ny polisy tsy hiditra hanadio ny lalana ho an'ny RWE.
Ny volana Septambra, namoaka baiko ireo manam-pahefana avy ao amin'ny fanjakana alemàna ao North Rhine-Westphalia ny hanesorana ireo trano hazo mba hanomezana toerana ny fanitarana ilay fitrandrahana arintany.
“Mpihanika hazo matihanina ireo olona naka ahy avy teny ambony trano hazoko”, hoy i Lou, mafana fo hafa iray. “Tonga niaraka tamin'ny vy fibatàna, fangalàna serizy ary fitaovam-pijinjana izy ireo mba hanapahana ireo hazo ary hisavasavàna ny làlany hahafahany mitondra ny milina mavesatra ary koa hanalana ireo olona ao amin'ny trano hazony avy. ”
Mahazo “lignite” 49,6 tapitrisa taonina isantaona izay antsoina koa hoe arina volontany na arina malemy Ilay ngezalahin'ny angovo RWE. Alemaina no mpamokatra “lignite” betsaka indrindra eto an-tany. Mamoaka karbaona betsaka kokoa ny fitrandrahana ny arintany miloko volon-tany noho ny arina mafy. Ny toeram-pitrandrahana harena ankibon'ny tany RWE ao Rhineland no tena mpamoaka karbaona be indindra any Eorôpa. Izy no tompon'andraikitra amin'ny 80% amin'ny famoahana karbaona ao alemaina avy amin'ny sehatry ny orinasa mpamokatra angovo. Orinasa telo amin'ireo dimy mpandoto indrindra ao Eoropa no an'ny RWE.. Naneho ny tsy fitovian-keviny tamin'ny tetiandron'i Alemaina momba ny fanafoanana ny arintany ny RWE.
“Tsy resaka ala fotsiny ihany”
Mafana fo iray hafa, Momo, no nampifandray ny ady ho fiarovana ny alan'i Hambach amin'ny tolona hafa ho fiadiana amin'ny fiovaovan'ny toetrandro. “Isika no tena mamokatra karbaona be indrindra maneran-tany, mahatonga ny fiovaovan'ny toetrandro, izay tsy maintsy andosiran'ny olona ao amin'ny ilabolantany Atsimo. Mihoatra lavitra noho ny fiarovana ny ala tsy ho tapaka ity tolona atao ity, ”hoy izy.
Niray hevitra taminy koa i Lou : “Ho ahy manokana dia anisan'ny tolona iray midadasika iraisampirenena ity. Ny zava-mitranga eto — ny arintany izay azo sy manosika ny fiovaovan'ny toetrandro — dia olana maneran-tany. Tena zava-dehibe ho ahy ny fahatongavako eto sy ny fanohanako ilay tolona, ary mijoro amin'ny firaisankina amin'ny ady atao eto sy ireo tolona manerana izao tontolo izao, manohitra ny fiovaovan'ny toetrandro, ny kapitalisma, ny fanavakavahana. Ampahany amin'ny tolona iray lehibe kokoa anoherana ny rafitra ankapobeny misy amin'ny endriny ankehitriny izany.
Fametrahana tetezana ifandraisan'ireo mafana fo miady amin'ny fiovaovan'ny toetrandro sy ireo mpiasa mpitrandraka arintany
Nanao velirano ny hampihena ny famoahany karbaona hatramin'ny 40% i Alemaina hatramin'ny taona 2020, saingy tsy nahatratra ny tanjony. Nanangana vaomieran'ny fialàna amin'ny fitrandrahana arintany ny governemanta. Ny faran'ny taona, nangatahana io vaomiera io hametraka paikady ara-toekarena ho an'ireo mpiasa mpitrandraka arintany sy ny faritra, hamoaka fepetra hampihenana ny famoahana entona karbona mifanaraka amin'ilay tanjona napetrak'i Alemaina hiadiana amin'ny fiovaovan'ny toetrandro, ary hanondro daty hamaranana ny famokarana angovo azo avy amin'ny arintany.
Nahasarika ny sain'ny besinimaro teny anatin'ny sehatry ny adihevitry ny daholobe momba ny fanalàna tsikelikely ny fampiasana arintany ny fandraisana andraikitr'ireo mpitrandraka arintany sy ireo mpiasa hafa. Eo no maha zava-dehibe ny asan'i Christopher.
Mpikambana ao amin'ny hetsika miady amin'ny fiovaovan'ny toetrandro i Christopher ary efa niaraa niasa tamin'ireo vondrom-piarahamonina voakasiky ny fitrandrahana harena ankibon'ny tany. Izy no nikarakara ireo fihaonana voalohany teo amin'ireo mpiasa mpitrandraka “lignite” sy ireo mafana fo miady amin'ny fiovaovan'ny toetrandro, na ny ‘fifampiresahana milamina’ araka izay ilazany azy ireny, satria ‘efa be loatra ny fifandonana nisy’, hoy izy.
Nampihaona ireo mafana fo miady amin'ny fiovaovan'ny toetrandro sy ireo mpitrandraka arintany i Christopher
“Niresaka momba ny fiovaovan'ny toetrandro sy ny “lignite” izahay, momba ny asa sy ny fanovàna ny toekarena. Tsy ny asa ao amin'ny indostrian'ny “lignite” fotsiny ihany anefa. Rehefa mitsahatra ny “lignite” dia tsy ny loharano lehibe indrindra mpamoaka karbaona any Eorôpa irery ihany no atsahatra, fa manery ihany koa hisian'ny adihevitra mikasika ny sehatra ara-toekarena hafa — karazana toekarena toy inona no ilaintsika ? Natombokay io fifampiresahana io niaraka tamin'ireo mpiasa mpitrandraka “lignite” io, hoy i Christopher.
‘tsy misy asa eny amin'ny planeta maty’ io no sorabaventy lanjain'ireo mpanao hetsi-panoherana mba hiarovana ny alan'i Hambach
Ny herin'ny hetsika iraisana
Ilay vehivavy Kolombiana, Maria Fernanda, izay niaina tany Alemaina nandritra ny 22 taona, dia anisan'ireo mpandray anjara tamin'ilay hetsika hanavotana ny alan'i Hambach. Manan-danja ho azy sy ireo teratany ho an'ny mponina teratany ao Kolombia io tolona io satria nisy fiantraikany teo amin'ny àlan-dry zareo ihany koa ny fandringanana ataon'i RWE.
“Tamin'ny herintaona, nisy vehivavy teratany avy ao Kolombia tonga tao Alemaina mba hitaky ny hampijanona ny fitrandrahana arintany ao,” hoy i Maria Fernanda. Mpandika teny ho an'ny mponina teratany no asany.
Maria Fernanda teo akaikin'ny alan'i Hambach
Samy niteny, na i Strobo, na i Lou, na i Momo, na i Christopher sy Maria Fernanda, fa ity hetsika mihamitombo hanavotana ny alan'i Hambach ity no manome fanantenana azy ireo.
“Tsara ny fahatsapana, vitantsika ny nanangana hetsika goavana sy maro karazana tao anaty fotoana fohy, izay tena ilaina hiadiana amin'ny fiovaovan'ny toetrandro,” hoy i Christopher.
Ho an'i Maria Fernanda, fifohazan'ireo olona tonga saina hoe ‘tsy vola fotsiny ihany no ilaintsika, fa miankina amin'ny Tany renintsika isika — ny rivotra madio, ny rano — mba hihinana sy hivelona’. “Fotoana tsara iaraha-mientana sy hampiray izao,” hoy izy.
Ary rehefa miara-mientana, mino i Momo fa handefa hafatra matanjaka ho an'ny governemanta alemàna ry zareo hoe ampy izay, tena ampy; ka ny firaisankinan'ny olona an'arivony no hampiseho ny tanjaka iombonany.
Fandreseana tao Hambach
Fandresena goavana ity ho an'ny hetsika momba ny toetrandro. Jereo ka ianaro ny fomba nataon'ny vondron'olona iray tonga niaraka mba hiaro ala tranainy iray sy hanakanany ny fanitàrana toerana iray midadasika fitrandrahana arintany .#hambachforest #hambibliebt
Geplaatst door 350.org tamin'ny Alakamisy 15 Novambra 2018
Tsy hihemotra amin'ny tolona ataony akory ireo mafana fo toa an-dry Lou sy Strobo izay nanangana trano hazo tany anaty ala, izary noravàn'ny mpitandro filaminana ary efa manomboka manorina indray.
“Afaka manaisotra anay amin'ny trano hazonay ry zareo saingy tsy afaka manàla ilay hetsika, tsy afaka manàla ireo hevitra hiadianay koa ry zareo”, hoy ny nambaran'i Strobo.